स्वास्थ्य/ जिबन शैली Archives - Tanahu Post
स्वास्थ्य/ जिबन शैली
जुनसुकै क्यान्सरको पनि उपचार यहाँ १०० % गर्छु : कमलराज जोशी, बैद्य
Posted in स्वास्थ्य/ जिबन शैली
नेपालको नामी वकिल बन्ने उद्देश्य बोकेर बझाङबाट काठमाडौं छिरेका थिए । नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेका उनले डिल्लीबजारमा ल फर्म पनि खोले । केही समय वकालत गरेपछि उनलाई वकालती पेशामा मन लागेन, उनी आफ्नै गाउँ फर्किए । कमलराजका हजुरवुवा बझाङका राजगुरु थिए । बझाङमा उनले गुरुकुल चलाएका थिए । गुरुकुलमा बास्तु, ज्योतिष, पुराणलगायत विभिन्न विषयमा पढाई हुन्थ्यो । कमलले पनि हजुरबुवासंग विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेका थिए । वकालती काम छाडेका उनले गाउँमा गएर परम्परागत उपचार पद्धती र जडिबुटीका बारेमा अध्ययन गरे । अध्ययनकै क्रममा उनी भारतका विभिन्न स्थानमा पनि पुगे । उनले क्यान्सर रोगले थला परेका विरामीहरुको कल्पसनद पद्धतीबाट उपचार सुरु गरे । उनले हजुरबुवाबाट सिकेका सीप भारतमा प्रयोग गरे । फ्रिखबरका अनुसार भारतमा सफल रुपमा उपचार गरेपछि उनी २०६१ मा काठमाडौं आए र यहाँ पनि उपचार सुरु गरे । उनले अस्पतालमै राखेर
बिहान खाली पेटमा दुई पोटी लसुन र एक गिलास पानी खानुहोस्, यी खतरनाक रोगबाट बच्नुहोस्
लसुन प्राय हामीले तरकारी पकाउँदा प्रयोग गर्ने गर्छौ तर यसका स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै गुणबाट हामीमध्ये सायद थोरै मात्रै जानकार छौँ। लसुन तरकारीमा प्रयोग गर्नका लागी मात्र उपयुक्त नभइ औषधीका रूपमा समेत निकै उपयोगी मानिन्छ। लसुनका केही उपयोगिताका बारेमा जानीराखे भविष्यमा तपाईलाई समेत फाइदाजनक हुन सक्छ भने अहिले आफूमा रहेका समस्याबाट बच्नका लागी समेत यो सामग्री उपयोगी हुन सक्छ। जानीराखौँ लसुनका केही उपयोगिता १. गानो गएमा : लसुन पिसेर वा एक केस्रा लसुन तातो पानीसित खाएमा गानो गएको अवस्थामा फाइदा गर्छ। २. विषम ज्वरोमा : बिग्रेको ज्वरोमा लसुन घिऊ वा तेलमा डढाएर त्यो घिउ वा तेल पिए लाभ गर्दछ । ३. मुटुको रोगमा : यस रोगमा घिऊमा फुराएको लसुन एक(दुई केस्रा भात खान लाग्दा भातैमा मुछेर खाने गरे लाभ गर्छ। ४. शरिर सुनिएकोमा : लसुन हालेर पकाएको तेलम मालिस र एक(दुई केस्रा बिहान खाली पेटमा खाने गर
बाहिरको खाना नखाने, दिनहुँ व्यायाम र स्वास्थ्यलाई पुरा ख्याल गर्दा पनि जानी-नजानी यस्ता कयौँ चीज छन्, जसलाई हामी स्वास्थ्यवर्धक ठानी दैनिक खानामा समावेश गर्छौँ तर वास्तवमा यो हाम्रो लागि घातक सावित हुनसक्छ । एक पटक खानपानको ती स्वस्थ चीजहरू प्रति ध्यान दिनुहोस्, जसको सेवनले हामीलाई पत्थरीको समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । भेडे खुर्सानीमा अक्सलेटको क्रिस्टल्स पाईन्छ, जो क्याल्शियमसँग मिलेर यसलाई बाँध्ने गर्छ । यसबाट क्याल्शियम अक्सीलेटको क्रिस्टल बन्छ । यो नै पत्थरी हुने गर्छ । ‘द हेल्थ साइट’ अनुसार यदि तपाई भेडे खुर्सानी कम खानुहुन्छ भने पत्थरीको समस्या सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईलाई पहिले देखि पत्थरी छ या पेट सम्बन्धि कयौँ रोगहरूबाट चिन्तित रहनु भएको छ भने अक्सलेटले भरिपूर्ण चकलेट कम खानुहोस् । यदि तपाई खाली पेट चिया पिउनुहुन्छ भने यसले तपाईलाई पत्थरी जस्ता गम्भीर समस्या उत्पन्न
तपाईसँग यस्तो बानी छ ? ग्यारेण्टीका साथ भन्न सकिन्छ अब किड्नी बिग्रियो – ►ज्ञान बाँड्नु सबैभन्दा ठूलो धर्म हो त्यसैले सबैले लाइक तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला 👇 👇
काठमाडौ । जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुुनुमा मानिसको लापरवाही मुख्य जिम्मेवार छन । जुन यस प्रकार छन् १ चिसो सर्दी र चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति अज्ञानता नदेखाउनुहोस् । चिसोले पोस्ट इन्फेक्टिभ ग्लोमेरोनेफ्राइटिस नामक रोग लाग्छ । यसले किड्नीमा व्याक्टेरिया उत्पन्न गर्छ । २ खानामा धेरै नून खाँदा वा अन्य नूनिलो खानेकुराले पनि किड्नी खराब बनाउँछ । नूनले सोडियम ब्लड प्रेसर गराउँछ, जसको असर किड्नीमा पर्छ ३ पिसाब रोक्दा पिसाव थैली भरिन्छ । पिसाब भरिएर किड्नीसम्म पुग्छ । पिसाबमा हुने व्याक्टेरियाले किड्नीलाई हानी गर्छ । ४ पानी कम वा ज्यादा पिउनु शरीरलाई दैनिक ८ देखि १० गिलास पानी पिउनु जरुरी छ । थोरै पानी पिउदा पनि शरीरमा जम्मा भएको विकारले किड्नीको नियमित कार्यलाई असर गर्छ । ज्यादा
स्वस्थ छालाका लागि के खाने, के नखाने
कार्बोहाइड्रेटजन्य खाना annapurna post शरीरमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी भयो भने डन्डीफोर र छालामा धब्बा देखापर्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। छाला सुन्दर पार्न ब्रेड, क्यान्डी, पास्ता, सोडा, जुसजस्ता कार्बोहाइड्रेट र चिनीको मात्रा उच्च भएका खाना कम खानु राम्रो हुन्छ। यस्ता खानाले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउँछ। जसले गर्दा शरीरमा चिल्लो पदार्थ बढी उत्सर्जन हुन्छ र यसले डन्डीफोर चाँडो फैलाउँछ। कार्बोहाइड्रेटजन्य खानाको सट्टा तरकारी र गेडागुडीजस्ता प्रोटिनजन्य खाना खानु राम्रो हुन्छ। यस्ता खानाले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउँदैन। बढी नुन आँखाको तलपट्टिको भाग सुनिने अथवा आँखावरिपरि डार्क सर्कल देखापर्ने समस्याबाट हैरान हुनुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईंले सोडियमको मात्रा बढी लिइरहनुभएको छ। यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउन शरीरमा सोडियमको मात्रा घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामीले दिनहुँ खाने नुनको मात्र
जानिराखौँ, लेमन टी का केही फाइदा (भिडियो सहित
लेमन टीको स्वाद राम्रो हुनुका साथ साथ शरीरका लागि पनि निकै फाइदाजनक मानिने गरिन्छ। कागतीमा केही यस्तो प्राकृतिक तत्व हुने गर्दछ, जुन हाम्रो त्वचाका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। साथ साथै यसले तपाईलाई फ्रेस पनि राख्ने गर्दछ। जानिराखौँ लेमन टी का केही फाइदा १) कागतीमा सिट्रिक एसिड पाइने गर्दछ। जसले तपाईको पाचक क्रियालाई ठिक राख्ने गर्दछ। यसलाई हरेक दिन बिहान पिउनु पर्दछ। २) लेमन टीमा फ्लेभोनोइड्स नामक केमिकल पाइने गर्दछ। यसले धमनिमा रक्त धक्का हुन दिदैन र हृदय घातको खतरा कम हुने गर्दछ। ३) लेमन टी ले शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्दछ। ४) लेमन टी पिउँदा चिसो तथा फ्लूको समस्या समेत कम हुने गर्दछ। ५) लेमन टी मा प्रचुर मात्रामा एन्टीअक्सीडेन्ट गुण हुने गर्दछ। साथसाथै यसमा पोलिफीनोल र भिटामिन सी पनि अधिक मात्रामा प्राप्त हुने गर्दछ। जसले शरीरमा क्यान्सर सेल्स हुनबाट रोक्ने गर्
सावधान ! नेपालमा बाँझोपनको समस्या तीव्र गतिमा बढ्दो, यि खानेकुराले बढाउँछ बाँझोपन
पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा बाँझोपनको समस्या तीव्र गतिमा बढ्दो छ । त्यसमा पनि पुरुषमा हुने बाझोपनको ग्राफ निकै तीव्र गतिमा बढ्दो छ । बाँझोपन बढ्नुमा जीनको मात्र दोष नभई अस्वस्थकर खानपान, धूमपान, मद्यपान आदि कुराको सेवनले पनि बाँझोपनको समस्या बढ्ने गरेको छ । त्यसबाहेक केही यस्ता खानेकुरा पनि छन् जसको सेवनले सेक्स लाइफमा मात्र असर पार्दैन, पुरुषहरूमा बाँझोपनको समस्या समेत निम्त्याउने गर्छ । के छन् त त्यस्ता खानेकुरा :प्रोसेस्ड मासु मासु धेरैलाई मन पर्छ । मासु खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो पनि मानिन्छ । तर कुनै पनि मासु छान्दा सही मासुको छनोट गर्नु जरुरी छ । मासु अर्गानिक छ भने त समस्या हुँदैन तर प्रोसेस्ड मिट खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले त्यति फाइदाजनक मानिँदैन । प्रोसेस्ड मिटले स्पर्मको गुणस्तरमा कमी ल्याउने गर्छ । त्यसमा पनि ह्यामवर्गर, हट डग, सलामी लगायतमा प्रयोग हुने प्रोसेस्ड मिटले
“बाँसको तामा”खाने गर्नु भएको छ भने यो अवस्य हेर्नुहोला
मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता समस्याका लागि औषधि सरह “बाँसको तामा” बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’ हाम्रा पाकघरमा असार महीनाको छेकछाकतिर सब्जीको रूपमा पाक्ने परिकारमध्ये एउटा हो बाँसको तामा । अंग्रेजीमा बेम्बो शूट भनिने यो परिकारलाई हामी तामा भनेर चिन्छौं। हामी यसो त धेरैप्रकारका बाँसको तामा सब्जीको रूपमा प्रयोग गर्दछौं, तरै पनि प्रचलित रूपमा चोयाबाँस वा जुन बाँसबाट चोया बनाउन सकिन्छ, त्यस्ता बाँसको तामा खानेगर्छौं भने परेङ (सानो प्रजातिको बाँस, जसबाट चित्रा बनाइन्छ) को तामा पनि हामी सब्जीको रूपमा खान्छौं । ठूला बाँसको तामाभन्दा साना प्रजातिका बाँसको तामा खानको निम्ति निक्कै स्वादिष्ट हुन्छ । यसलाई परिकारको रूपमा कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुरा लगभग धेरै गृहिणीहरूलाई थाहा छ । यसको ताजा टुसाबाहेक बोत्तलमा अच
होसियार भुलेर पनि सेवन नगर्नुस यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्यान पनि जान सक्छ
लसुनले हाम्रो खानालाई मीठो बनाउन मात्रै होइन, यसमा पाइने धेरै किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाइराख्न पनि धेरै मद्दत गर्दछ। लसुनको नियमित सेवनले स्वास्थ्यमा सुधार आउनेमात्रै होइन, केही खतरनाक शारीरिक समस्या र रोगहरूबाट पनि बचाउन सक्दछ। तर, यदि तपाईँ निम्न ५ किसिमका मानिसहरूमा पर्नुहुन्छ भने, लसुनजस्तो स्वस्थवर्दक कुरा खाँदा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। लसुनको सेवन गर्न नहुने ५ किसिमका मानिसहरूः १. कलेजोको समस्या भएको व्यक्ति ब्याक्टेरियालाई मार्ने एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिभाइरल खानेकुरा भएकोले, मानिसहरूले लसुन खाँदा हेपाटाइटिसलाई ठीक गर्दछ भन्ने विश्वास गर्दछन्। हेपाटाइटिस यस्तो रोग हो, जसले मानिसको कलेजोलाई असर गर्दछ। तर, हेपाटाइटिस भाइरसको उपचारको लागि लसुन खानु उचित हुँदैन। किनभने, लसुनको सेवनले पेट र आन्द्रामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ, जसले हाम्रो आन्द्रा
तपाईंलाई कुनै बिमारी त छैन ? जिब्रोमा चम्चा राखेर १ मिनेटमैं पत्ता लगाउनुस
जीवनशैलीमा आएको नाटकीय परिवर्तनसँगै रोगको संक्रमण समेत बढेर गएको छ । शहरी क्षेत्रमा रोग लागे या नलागेको बारेमा रगत र अन्य कुराको परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिएपनि सबैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा त झन परीक्षणको सुविधा नभएका कारण बिमारी छ या छैन थाहा नै नपाई गम्भीर बिमारीको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर आफ्नो शरीरले गर्ने संकेत र लक्षणका आधारमा हामीले रोगका सामान्य अनुमान गर्ने गरेका हुन्छौं । यहाँ यस्तै एउटा सामान्य विधि दिइएको छ, यसलाई प्रयोग गरेर एक मिनेटमा नै हामीभित्र के कुराको समस्या छ, पत्ता लगाउन सकिने छ । यो तरिका पत्ता लगाएको हो टोरोन्टो विश्वविद्यालयले । विश्वविद्यालयका उप प्राद्यापक र ब्रोडकाष्ट मेडिकल जर्नलिष्टले एउटा अनुसन्धानका क्रममा बिमारी पत्ता लगाउने यो सजिलो उपाय पत्ता लगाएका हुन । कसरी गर्ने परीक्षण ? चम्चाको भित्र पसेको भागलाई जिब्रोमा
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दसैंको शुभकामनाः विदेशमा रहेका नेपालीलाई विशेष अफर
जनताको लागि बोलिदिदां मेरो हत्या हुन्छ भने मेरो छातिमा गोली ठोक्नु, तर दाँया बाँया होइन : रबि
प्रधानमन्त्री चढेको हेलिकप्टर भरतपुरको आर्मी ब्यारेकमा आकस्मिक अवतरण !
१५१ देशसँगकाे व्यापार : १२८ सँग व्यापार घाटा, २३ मा मात्रै नाफा
भारतमा चुनाव प्रचारको समय सकियो, मोदीको अवस्था के होला?
अझै ठूलो भूकम्प जानसक्ने भूगर्भविद्को निचोड
एकै दिनमा ३१ जनासँग सेक्स गरेकी एक युवतीको हेरौ यौन कथा (14)
अझै ठूलो भूकम्प जानसक्ने भूगर्भविद्को निचोड (5)
भर्खरै आयो दुखद खबर अर्को ठुलो विमान दुर्घटना प्लेनको भयो दुइ टुक्रा !! (4)
आफ्नै साथीको श्रीमानसँगको त्यो रात, अझै मलाई सम्झिदा पनि लाज लाग्छ (3)
© Copyright 2016–2019 Tanahu Post. All rights reserved.